काठमाडौंको संकटा नेपालगन्ज गोल्डकपको फाइनलमा – Sadarline
कटुवा पेस्तोलसहित दाङमा एक जना पक्राउ
तरुण दलको बाँके बन्दले जनजीवन प्रभावित
महिला संघद्वारा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग
राष्ट्रियसभा सदस्यमा बामदेव गौतम मनोनित
तिहारलगत्तै छठको तयारीमा जुटे मिथिलावासी
चर्चित र्यापर भिटेन नेपालगञ्ज आउदै
हुकुमी शैलीमा संसद् विघटन गरियो : सुरेन्द्र हमाल
समता स्कुल कोहलपुरमा पनि सञ्चालन हुँदै
नेपालगञ्ज रंगशालामा दुबो लगाईंदै
बाँकेका १ सय ८ मुसलमान यो वर्ष हज गर्न जाँदै
कोरोनाबिरुद्ध सचेत हुन प्रेस संगठन बाँकेको अपिल
प्रदर्शन उग्र बनेपछि महेन्द्रनगरमा कर्फ्यू
काठमाडौंको संकटा नेपालगन्ज गोल्डकपको फाइनलमा
२४ जेष्ठ २०७५, बिहीबार २०:३६
२४ जेठ, नेपालगन्ज : बाँकेको खजुरा गाउपालिकाको डि गाउमा जारी तेस्रो टुबोर्ग नेपालगन्ज गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा काठमाडौंको संकटा क्लव प्रवेश गरेको छ । संकटाले सुदूरपश्चिम–११ लाई ट्राइबेकरमा पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको हो । संकटा गतवर्ष पनि फाइनलमा पुगेको थियो ।
खेलको शुरुवाती ६ मिनेटमै विजय सिंहको गोलले सुदूरपश्चिमलाई अग्रता दिलाएका थिए । दोस्रो हाफको तीन मिनेटमै एलोन म्याक्सवेलले गोल गरेर बराबरी गरेका थिए । ७० मिनेटमा पुनः म्याक्सवेलले गोल गरेर टीमलाई अग्रता दिलाएका थिए ।
त्यो अग्रता भने तीन मिनेटमै सुदूरपश्चिमले बराबरी गरेको थियो । सुदूरपश्चिमका चेतन कठायतले गोल गरेर खेललाई बराबरीमा ल्याएका थिए । निर्धारित समयमा दुई÷दुई गोल भएपछि खेलको निर्णय ट्राइबेकरमा पुगेको थियो ।
ट्राइबेकरमा संकटाका सरोज ढकाल, रोमन लिम्बु र भुवन सुब्बाले गोल गरेका थिए । सुदूरपश्चिमका चेतन थारुले मात्रै गोल गरेका थिए । शुरुवातमै नरेन्द्र चौधरीले बाहिर हानेका थिए । विजय सिंह र योगेन्द्र चौधरीको प्रहार संकटाका किपर दिनेश थापाले रोकेका थिए ।
सुदूरपश्चिमका व्यवस्थापक सुरेश हमालले आफ्ना रक्षापंक्तिका खेलाडी घाइते हुँदा निर्धारित समयमा बराबरीमा टुंगिएको बताए । उनले प्रशिक्षक बिना नै आफ्ना खेलाडीले राम्रो खेलेको बताए ।
संकटाका प्रशिक्षक जुजुकाजी डंंगोलले गर्मीका बावजुद टीमले राम्रो खेलेको बताए ।
कप्तान सरोज दाहालले स्वभाविक खेल खेल्न नसकेको बताए । टीम पनि सेट नभई ल्याएको बताए । उनले फाइनलमा राम्रो गर्ने बताए । शुरुमा गर्मी र रक्षापंक्तिको तालमेल नहुँदा गोल खाएको बताए ।
संकटाले फेरि एक पटक सुदूरपश्चिमलाई घर फर्काएको छ । दोस्रो टुबोर्ग नेपालगञ्ज गोल्डकपमा पनि संकटाले सुदूरपश्चिमलाई सेमिफाइनलमा पराजित गरेको थियो ।
खेलको म्यान अफ म्याच शान्त गुरुंग भएका छन् । उनले नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यको हातबाट मोबाइल पाएका छन् ।
संकटाले अब उपाधिका लागि लाली रुपन्देही–११ संग शनिबार प्रतिस्पर्धा गर्ने बाँके जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष भोजराज शाहीले बताए । दोस्रो संस्करणमा यी दुई टोली फाइनलमा पुगेका थिए भने रुपन्देहीले बाजी मारेको थियो ।
पाँच लाख पुरस्कारको नेपालगञ्ज गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताकाको उत्कृष्ट खेलाडीलाई मोटरसाइकल पाउनेछन् ।
यसैबीच, टिकट काटेर फुटबल हेर्ने एकजनाले मोबाइल पाएका छन् । आयोजकले लक्की ड्रबाट टिकट ८६ का सम्राटलाई मोबाइल दिएको हो ।
क्यान्सर रोग बारे प्रशिक्षण
सदरलाइनडटकम २५ जेठ, नेपालगन्ज : बा“केको खजुरास्थित सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले ग्रामिणक्षेत्रमा कयान्सर रोगका बिषयमा सचेतना फैलाउन सुरु गरेको छ । रोगको पहिचान नभएर उपचार नै नपाई अकालमा ज्यान गुमाइरहेको अवस्थामा क्यान्सर अस्पतालले सुरु गरेको अभियान प्रभावकारी हुने देखिएको छ । क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. बिश्वराम पौडेलका अनुसार ग्रामिणक्षेत्रसम्म […]
५ बैशाख २०७६, बिहीबार २१:५७
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा उद्घाटन
११ श्रावण २०७६, शनिबार १४:२५
कुवेतविरुद्ध नेपालको शानदार जीत
१५ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०७:२९
आठौंकोे मस्कट आईपुग्यो नेपालगञ्ज !
३० पुष २०७५, सोमबार १४:५८
खेलकै क्रममा भारतीय क्रिकेट खेलाडीको मृत्यु
२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार १८:००
सेना दिवसको अवसरमा ‘रन फर फन’ कार्यक्रम गरिदै
१८ माघ २०७५, शुक्रबार १७:५९
बाँके शिक्षाले चुम्यो मेयर कपको उपाधी